Ornagai Mobile Dictionary — MYSTERY ZILLION
Ornagai Mobile Dictionary
December 2009 edited June 2010 in Project
Ornagai Mobile Dictionary အား အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးချင်ပါတယ်။
အဲဒါ ခွင့်ပြု မပြု တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါခင်ဗျာ။
December 2009 edited December 2009 Administrators
ya... it'safree... you can do it
December 2009 edited December 2009 Moderators
then..I want you to feed back us..
at which phone, it shows ERRORS.. how.. if you could. pls take screen shot..or detail facts
ခွင့်ပြုချက်ရပြီ မလို့ ဖြန့်ဝေပါတော့မယ်။
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Error များနဲ့ ဘယ်ဖုန်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး ဘယ်ဖုန်းတွေမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုလဲ ဆက်ပြီးရေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
လောလောဆယ် စမ်းသပ်ချက်အရ အောက်ပါ ဖုန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
work with NOkia 5530
But it dosent fully support wtih touch screen phone.
ကြုံလို့ ဒီမှာဘဲမေးကြည့်မယ်။ကိုစေတန်ရေ ကိုစေတန်ရဲ့ornagai iphone နဲ့ iphone zawGyi ကို best of the mobile application of the year မှာ ၀င်ပြိုင်ပါလား။:D
iPhone Zawgyi က Application မဟုတ်တော့ ကျွန်တော် ဝင်မပြိုင်တာပါ။ Application ဆိုတာထက် Utilities ပိုင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ နောက်ပြီး Ornagai ကလည်း WeDict Pro ထဲမှာ ထည့်ပေးထားတာပဲရှိတာပါ။ ကျွန်တော်ရေးထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဝင်မပြိုင်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Ornagai website ကော java mobile app ကော ဝင်ပြိုင်ထားပါတယ်။
ကိုစေတန်ရေ.. ကျွန်တော်အသိတစ်ယောက်က တခြားနိုင်ငံကနေ. ဖုန်းထဲက နေ gtalk ပြောနေပါတယ် အဲဒါ ဖုန်းထဲက နေ မြန်မာလိုရိုက်ပြီးပြောချင်လို့တဲ့ အဲဒါ ဘာဆော့၀ဲလ် ထည့်ရမလဲ လို့ မေးနေလို့ပါ. ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းနဲ့ ပါတ်သတ် ရင် ဘာမှ မသိတဲ့ အတွက်. အဲဒါလေး ပြောပေးပါအုံးနော်. နောက်ပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ ရတယ် ဆိုရင်လည်း ရတဲ့ ဆိုဒ် လေး ရယ်.. တကယ်လို့ ၀ယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လို ၀ယ်ရလဲ ဆိုတာ.ကိုရော ပေါ့ဗျာ.. .ကျွန်တော့် အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. အဲဒီ သူငယ်ချင်း အတွက်. မေးကြည့်ပေးတာပါ ခင်ဗျ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဘာ ဖုန်း အမျိုးအစားလဲမသိဘူး.. ??
Keyboard and Font For iPhone, iPod Tocuh
Zawgyi For Windows Mobile
Zawgyi For Android
ကိုစေတန်ကိုညီလေးတစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်.. နိုကီယာတွက်လည်းဇော်ဂျီပေးစေချင်ပါတယ်..အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့........အမ်ဇက်က အစ်ကိုများ မင်ဘာများအားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်လျှက်....................
ကိုဆေတန်ရေ... ကျနော်တို့ symbian os ယူဇာတွေအတွက်ကော မြန်မာဖောင့်အစီအစဉ်မရှိဘူးလား။ Nokia တွေက များသောအားဖြင့် အကုန်လုံးနီးနီးပါပဲ symbian OS တွေနဲ့ run တာများတယ်။ ပြီးတော့ ornagai dictionary ကလဲ touch screen ကို အပြည့်support မလုပ်ဘူးဗျ...
ornagai dictionary is not design for touch. It's writting by Seth and his phone is not touch
Nokia haveေ, ာ,းproblem. most of are OK.
ကျနော် zawgyi ကို android မှာသွင်းတာ အဆင်မပြေဘူးဗျာвЂ¦
su ကိုရိုက်တာ permission denied ဘဲပေါ်နေတယ် ကျနော့် ဖုန်းက Motorola Droid 2.2 ပါ
Motorola Droid ကတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ... သူက root ပြန်လုပ်ရတာ ခက်တယ်... Nexus One ပဲ root permission ပေးထားတာ... တခြား phone တွေက မပေးထားတော့ zawgyi သွင်းလို့ရတာ ခက်မယ်.. အရင်ဆုံး root permission ရအောင် လုပ်ရမယ်..
Iphone မှာဆိုရင်ကော ဘယ်လိုုလုပ်ရမလဲ ... ဟီး .. အနော့်မှာတော့ မရှိပါဘူး .. ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုဆို အကူအညီဖြစ်အောင် ကြိုမေးထားတာ
Iphone မှာ သွင်းလို့ရမလား? Itouch တို့ Ipad တို့မှာလေ.. ???? :P
iPhone မှာဆိုရင်တော့ Official version ကတော့ app store ကနေ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် stardict dictionary အသုံးပြုလို့ရတဲ့ App တွေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။